परेवाभिर किन बनाउने ? - Khabar Break | Khabar Break
– ओम बहादुर ग्लान । परेवाभिरको बारेमा सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा विभिन्न तरिकाले चर्चा परिचर्चामा हुँदैछ । हुन त कसैको राजनीतिक तथा दलगत स्वार्थ अभिव्यक्त भए यो बीचमा परेवाभिरलाई लिएर । जुन क्रममा कतिपयले व्यक्तिगत वाईयात तुजुक प्रदर्शन गर्न पनि भ्याए । जे भएपनि हामी पारेवाभिरमा बाटो बनाउँछौं भनेर सल्लाह अनुसार अभियन्ताको रूपमा निरन्तर सहयात्री बन्नु भएका खासगरि राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल र कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंक बहादुर मुक्तान साथै पत्रकार शिव कुमार काशी र बनस्तम थिङ लगायत प्रति उल्का आभारी छु ।
पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा माननीय विरोध खतिवडा ज्यू, बागमती प्रदेश सभा माननीय सन्त बहादुर चेपाङ, माननीय इन्द्र बहादुर बानियाँ लगायत राजनीतिक अगुवा र पत्रकार मित्र साथै परेवाभिरको बारेमा चासो र चिन्ता गर्नु भई हामी प्रति सहनभूती राख्नु हुने सबै प्रति धेरै धेरै धन्यवाद छ ।
‌परेवाभिर किन बनाउने भन्ने केही केही कुरा हामीलाई जानकारी हुनै पर्दछ नत्र परेवाभिरको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने सवाल मात्र बन्छ । कसैको भोटको राजनीति , कसैको निम्ति राजनीतिक छवि जोगाउने विषय मात्र बन्न सक्छ ।
अब हुँदाहुँदा परेवाभिरकाे बारेमा उल्का अचम्म लाग्ने कुरा कसरी गर्न सकिन्छ र मिडियामा कसरी छाउन सकिन्छ भनेर झुटा आश्वासन सहितका शब्द राजनीतिको नकरात्मक संकेत पनि देखा पर्न थालेको छ । रङ्गीन शब्दजालको राजनीति परेवाभिरले खोजेको होइन ।
परेवाभिरमा हामीले बाटो खोजेको हो । हाम्रो पीडामा कसैको राजनीति आवश्यक छैन । यस्तो हर्कत वास्तविक भुक्तभोगी जनताको पीडा र समस्यासंगको खेलवाड हो । हामी यो किमार्थ स्वीकार्न तयार छैनौं । हामी कुनै सौदाबाजी पनि गर्ने छैनौं ।
हामी सक्दा पनि सक्दैनौं किनकि पुस्तौं देखिको समस्या र पिडा हाम्रो पुस्ताको पालामा पन्छाउन खोजिरहेका छौं । हामीलाई बार्गेनिङ गर्ने समय छैन । हामी त काम गर्ने अवसरमा जुटेका छौं निस्वार्थ । तसर्थ हामी बाटो बनाउन बारबार अपिल गर्नेछौँ सम्बन्धित सबैलाई । हामी बारबार प्रतिबध्दता गर्छौं कि परेवाभिरमा जसरी पनि बाटो बनाउँछौं ।
६. बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा भई सकेको र पश्चिम क्षेत्रमा महेन्द्र राजमार्ग बाहेक रणनीतिक सडक नभएको अवस्थामा अब बन्ने यो रणनीतिक सडक मार्फत् सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानमा कोशेढुंगा सावित हुने भएकोले (मनहरी मलेखु- लगभग ५२ किलोमीटर) र (मनहरी आदम घाट – लगभग ५३ किलोमीटर) जुन बाटोले साबिक काकडा र सरिखेत समेतलाई समेट्दछ ।
अतः हामी पटक पटक भन्छौं जसरी पनि परेवाभिर बनाउँछौं । चाहे जस्तोसुकै कदम उठाउन परोस् । अब हामी रोक्दैनौ । किनकि पहिला गाउँपालिकाले परेवाभिर छल्ने भनेर dpr गरि टेन्डर गरेर सडक निर्माण कार्य गर्दै गर्दा प्रेम बहादुर मुक्तान परेवाभिर बाट झरेर मृत्यु भएको थियो । त्यो घटना पछि यसको विकल्पमा हजार बाटो बनाए पनि परेवाभिरमा बाटो जसरी पनि बनाउनै पर्छ भन्ने हामीले सल्लाह गरे बमोजिम गाउँपालिकाले dpr गरि सकेको छ । यही श्रावण महिनामा नै टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
अब सवाल बाटो बन्छ कि बन्दैन भन्ने होइन, सहभागिता जनाउने कि नजनाउने भन्ने हो । फरक पार्टी वा गुटको मान्छे हो कि होइन भन्ने अब पूर्वाग्रह नराखी सहकार्य र हातेमालो गर्न जरुरी छ ।
अन्तमा हामी व्यक्तिगत र दलगत हैसियत भन्दा धेरै माथि उठिसकेका छौँ यस्तो बेला सस्तो लोकप्रियताको रङ्गीन विज्ञापन हाम्रो लागि आवश्यक छैन । हामी तीन तहको सरकारले नै त्यो बाटो बनाउने हो । यसमा भ्रमको खेती गर्न जरुरी छैन । हिजो प्रसङ्ग बस बागमती प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री ज्यू ले जुन कुरा अभिव्यक्त गर्नु भएको छ परेवाभिरको बारेमा , त्यो आफैले प्रत्यक्ष नजर अध्ययन गरिसके पछि महसुस गर्नु हुनेछ । हाम्रो अभियानमा साथ रहनु हुनेछ । हामी अरु कसैको पक्षमा वा विरुद्धमा लागेको हो कि परेवाभिरमा बाटो बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुनेछ । हो, हामीलाई विश्वास छ हामी बनाउन सक्छौं । हामीलाई आशा छ सबै तहको सरकारले आफ्नो गहकिलो जनाउने छन् । २०७७/०४/१७ राक्सिराङ, मकवानपुर
( लेखक ग्लान बागमती प्रदेशका सांसद हुन् । )